वामदेव गौतमको गुप्तवास, यस्तो अवस्थामा भेटीए — Imandarmedia.com
वामदेव गौतमको गुप्तवास, यस्तो अवस्थामा भेटीए
काठमाडौँ। वामदेव गौतम गुप्तवास पसेपछि बाहीर निस्किन मुस्किल परेको छ। कुनै बेला पार्टी र राजकीय सत्ताका खेलहरूमा मुख्य भूमिकामा देखिने गौतम अहिले गुमनाम छन् ।
अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर असहमति जनाउँदै एमाले छाडेका गौतम दलविहीन छन् । प्रमुख दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरू यतिबेला स्थानीय चुनावको चटारोमा देखिएका बेला तिनै नेताका समकालीन बामदेव गौतम भने निकै फुर्सदिला देखिन्छन्।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दशकौँ गुजारेका उनी अहिले सामान्य नागरिकको दर्जामा सीमित देखिन्छन्। तीन पटक संसदीय चुनाव जितेर तीनै पटक मुलुकको गृह मन्त्रालयको समेत बागडोर सम्हालेका गौतम गुपचुप हुँदा धेरैको सोधीखोजीको विषय बन्न पुगेका छन्।
गौतम के गर्दैछन् त ? सोमबार बिहान साढे ११ बजे गौतम निवास भैँसेपाटी पुग्दा उनको निवासमा कुनै चहलपहल देखिएन। पत्रकार आएको गौतमका सहयोगीले जानकारी गराएपछि उनी कोठाबाट ढोकासम्म आइपुगे। हामीलाई देखेपछि गौतमले भित्रै आउन इशारा गरे। कोठामा पुग्दा टेबलभरि पुस्तकहरू असरल्ल थिए।
कोठामा छिर्ने क्रममै गौतमले मुख फोरे, राजनीतिक नेतृत्व। केही न केही गर्न बानी परेकाले चुनाव नलागेपछि फुर्सदमा अध्ययनमा लागेको छु, उनले आफ्नो दैनिकी सुनाए । तत्कालीन एमालेका शीर्ष नेता र पटक पटक मन्त्री भएका गौतमलाई यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनले पटक्कै छोएको छैन भन्ने उनको पहिलो वाक्यांशबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो।
चुनावमा चासो नभएपछि उनले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर क्याम्पेनिङ गर्ने कुरा पनि भएन। एक हिसाबले भन्ने हो भने मुलुकमा चुनावी माहौल तात्दै गर्दा वामदेव गौतम भने ‘म मौनतामा अल्झिरहेको मान्छे. भन्ने गीत गुनगुनाउँदै एक्लै रमाइरहे झैँ लाग्छन् ।
लेख्ने, पढ्ने र आफ्ना शुभेच्छुक, समर्थक र एमाले स्कुलिङका नेता कार्यकर्तासँग भेट्ने अनि फुर्सद निकालेर घरमै अध्ययन गरेर समय बितेको छ, कसरी समय व्यतीत भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा गौतम छोटो जवाफ दिन्छन्।
त्यसो त गौतमलाई एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न गइदिनुपर्‍यो भनेर सहयोगको अपेक्षा नगरेका भने होइनन् ।पौडेलबाहेक एमालेका अरू नेताले पनि गौतमलाई चुनाव प्रचार गर्न आग्रह गर्न छोडेका छैनन् ।
एमालेसँग गौतमको मन मरिसकेकाले पनि नेताहरूको आग्रहले उनको मन फर्किन सकेको छैन। भैंसेपाटीमा गौतमका छिमेकी छन् एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल । उपाध्यक्ष पौडेलले चुनाव प्रचारप्रसारमा गइदिनु पर्‍यो भनेर बारम्बार आग्रह पनि गरेका हुन् ।
तर, गौतमले पौडेलको आग्रहलाई खासै चासो दिएनन् । ‘मलाई पौडेलले चुनाव प्रचार प्रसारमा गई दिनुपर्‍यो, तपाईं जत्तिको नेताले बोल्दा प्रभाव पर्छ भनेर धेरै पटक आग्रह गर्नुभयो’ गौतमले भने, ‘तर, मैले कसैको पक्षमा चुनाव प्रचार गरेको छैन ।
चुनाव प्रचार गर्न पनि मन नि लागेको छैन भन्ने जवाफ दिएँ । पौडेलबाहेक एमालेका अरू नेताले पनि गौतमलाई चुनाव प्रचार गर्न आग्रह गर्न छोडेका छैनन् । एमालेसँग गौतमको मन मरिसकेकाले पनि नेताहरूको आग्रहले उनको मन फर्किन सकेको छैन।
खुलेर नबताए पनि गौतमको भित्री अपेक्षा एमालेले यो चुनावमा राम्रो नतिजा नल्याओस् भन्ने नै छ। यस्तो भावना जाग्नुमा एमालेसँगको वितृष्णा भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण स्थानीय चुनावप्रति नै उनको चासो र सद्भाव छैन।
केपी ओली प्रवृत्तिले नै मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर कम्युनिस्टहरू यो हालतमा पुगेको गौतमको निष्कर्ष छ । नेकपा विभाजन भएपछि पनि गौतम एमालेलाई एक बनाउन सकिन्छ कि भनेर निकै दौडधुप गरे ।
तर त्यसमा ओलीले सकारात्मक भूमिका नखेलेकाले आफ्नो प्रयास सफल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादीपछि एकीकृत समाजवादी कमजोर भएकाले स्थानीय तहमा धेरै सीट जिते हुन्थ्यो भन्ने गौतमको शुभेच्छा छ।
गौतमलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थानीय तहका अधिकांश उम्मेदवारले पनि चुनावमा सघाउन आग्रह गर्ने गरेका छन्। गौतमले नै राजनीतिमा हुर्काएका बढाएका अधिकांश नेताहरू एकीकृत समाजवादीबाट स्थानीय उम्मेदवार भएकाले गौतमको आडभरोसा खोजेका हुन् ।
त्यसैले उनीहरूले स्थानीय चुनावमा आइदिन गौतमलाई बारम्बार आग्रह गर्ने गरेका छन्। मलाई माया गर्ने धेरैजसो साथीहरू एकीकृत समाजवादी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले फोन गरेर चुनाव प्रचारमा आइदिनु पर्‍यो भन्नुहुन्छ तर म कुनै पार्टीको चुनाव प्रचारमा गएको छैन।
एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले जिते हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेको छ,’ गौतमले भने,‘तर, मैले आफ्नै नेतृत्वमा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी गठन गरेको छु। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा नभएकाले त्यहाँ गएर कसरी मैदानमा भोट माग्ने ? त्यो पनि मिल्दैन।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादीपछि एकीकृत समाजवादी कमजोर भएकाले स्थानीय तहमा धेरै सीट जिते हुन्थ्यो भन्ने गौतमको शुभेच्छा छ। तर, सत्ता गठबन्धन व्यवहारिक रुपमा तालमेल नभएकाले सोचे जति मत आउन नसक्ने गौतमको पूर्वआँकलन छ।
यद्यपि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलभन्दा बढी सद्भाव एकीकृत समाजवादीमा रहेकाले तालमेलमा पाएको सिट उसैले जितोस् भन्ने उनको सङ्केत देखिन्छ। गठबन्धनमा आफ्नो शक्ति जति छ, त्यति भागवण्डा खोज्नुपर्छ।
जुन स्थानीय तहमा जसको बढी प्रभाव छ, त्यसलाई प्रमुख दिनुपर्ने हो, कमजोर भएकाले उपप्रमुखसहित वडामा चित्त बुझाउने खालको हुनुपर्ने थियो, गौतमले गठबन्धनको भागबण्डाबारे सङ्केत गर्दै भने, तर, केन्द्रबाटै भागबण्डा गर्दा राम्रोसँग तालमेल भएजस्तो मलाई लागेन ।
असन्तुष्ट पक्षले चुनाव हराउने खतरा भयो। गठबन्धनमा शक्तिका आधारमा स्थानीय तह भागवण्डा नभएकाले चुनावी रौनक समेत हराएको गौतमको विश्लेषण छ। स्थानीय चुनावपछि गौतम सक्रिय हुने: अहिले गुप्तवासझैं बसेका गौतम स्थानीय तहको चुनावपछि राजनीतिमा सक्रिय हुने सोचमा छन्।
स्थानीय चुनावमा चुपचाप भएर बसेँ । कसैको समर्थन वा विरोध खुलेर लागेको छैन। कसैको पक्षमा भोट मागेको पनि छैन, गौतमले भने,‘स्थानीय चुनाव सकियो भने जेठपछि एउटा निर्णयमा पुगेर सक्रिय राजनीतिमा लाग्छु ।
त्यस क्रममा आफ्नो पहिलो जोड तत्कालीन नेकपालाई एक ठाउँमा जोड्ने प्रयास रहने उनको भनाइ छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा कम्तीमा एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई एकतामा जोडेर माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गौतमको इच्छा छ ।
त्यो चाहना पुरा हुन नसके एकीकृत समाजवादीमा जोडिने वा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्ने योजना गौतमको छ । मेरो पहिलो जोड तत्कालीन नेकपालाई एक ठाउँमा ल्याउने र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा जोड्न प्रयास छ ।
त्यसो हुन नसकेमा एमाले र एकीकृत समाजवादीवीच एकता गर्ने माओवादीलाई चुनावी तालमेलको अवस्थामासम्म ल्याउँछु, गौतमले भने,सबै विकल्प बन्द भएमा एकीकृत समाजवादीमा जोडिने वा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्छु । तर, अहिलेको जस्तै निष्क्रिय भई बस्दिन ।
गौतमले एकता वा आफ्नै नेतृत्वमा दल गठन गर्न पनि शक्ति चाहिन्छ भन्ने बुझेका छन्। त्यसका लागि गौतमसँग पर्याप्त शक्ति छैन। यस्तो अवस्थामा गौतमले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्लान्, त्यो हेर्न भने केही समय पर्खनुको विकल्प छैन।